प्रकाशित मिति: 2016/07/27
साउन १२, न्युयोर्क । अमेरिकी प्रथम महिला मिसेल ओबामाले डेमोक्य«ाटिक पार्टीको एक कार्यक्रममा हिलारीलाई समर्थन गर्न भन्दै गरेको भाषण अहिले संसारभर चर्चित बनेको छ । त्यसै भाषणको सम्पादित भावनुवाद ।
“अहो, मेरो श्रीमान राष्ट्रपति किन बन्नुपर्छ भनेर तपाइँहरुसँग कुरा गर्न यस्तै भेलामा आएको पनि आठ वर्ष वितिसकेछ । मैले त्यतिबेला ओबामाको चरित्र र विश्वासबारे बोलेका कुराहरु सम्झिनुहुन्छ? उनको शालिनता र अनुग्रहको कुरा पनि । ह्वाइट हाउसबाट उनले हाम्रो देशलाई सेवा गरेको हामीले प्रत्येक दिन देखिरहेका छौँ।
त्यतिबेला मैले तपाइँहरुलाई हाम्रा छोरीहरुका बारेमा पनि बताएकी थिएँ। उनीहरु कसरी हाम्रो मुटुको पनि मुटु र संसारका केन्द्र हुन् भन्ने कुरा । ह्वाइट हाउसमा हामी बसिरहेको समयमा नै उनीहरु सानासाना चुलबुले केटीबाट परिपक्व हुदैँ गए। सात र दश वर्षका हाम्रा छोरीहरु त्यतिबेला ती हिँउदका दिनमा बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीसँग ह्वाइट हाउस छिरेको र झ्यालका सिसामा गाला जोडेर बाहिर दृष्य निहालिरहेको मैले कहिल्यै बिर्सिने छैन । त्यतिबेला मलाई लागेको थियो, हैन, हामी कुन दुनिया छोडेर कहाँ आयौँ? के गर्यौँ हामीले?
हेर्नुस, त्यसबेला मलाई महसुस भयो कि, ह्वाइट हाउसमा बिताउने हाम्रो समयका आधारमा नै हामीलाई हाम्रा छोरीहरुले मूल्याङ्कन गर्ने छन्। अनुभवलाई हामीले कति राम्ररी व्यवस्थित गर्नेछौँ भन्ने कुराले उनीहरुको भविष्य निर्धारण हुने थियो। हाम्रा छोरीहरुलाई त्यो असामान्य जीवनबाट सही बाटोमा लगाउने चुनौतीबीच बाराक र म यही कुरा सोचिरहन्थ्यौँ। हामी छोरीहरुलाई बुझाउन चाहन्थ्यौं कि, उनीहरुले कसरी आफ्ना पिताको नागरिकता र विश्वासबारेमा सोधिने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने। कसरी चर्चित व्यक्तिहरुले टिभीमा व्यक्त गर्ने घृणास्पद विचारहरुले यो देशको सही प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने सिकाउँने। र, कसरी कोही क्रुर व्यवहार गर्छ भने हामीले उनीहरु जस्तो हुनुहुँदैन भन्ने ज्ञान निर्माण गर्ने। हाम्रो नीति वाक्य थियो, जब त्यस्ता मान्छेहरु तल झर्छन्, हामी माथि चढ्छौँ। अझै माथि माथि।
हामीले बोल्ने प्रत्येक शब्द, गर्ने प्रत्येक कार्य, हाम्रा बच्चाले हेरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। अभिभावकको रुपमा हामी उनीहरुको रोलमोडल हौँ । बाराक र मैले राष्ट्रपति र प्रथम महिलाको हाम्रो जिम्मेवारीलाई पनि त्यही अवधारणाले हेर्यौँ । किनभने हामीलाई थाहा छ, हामी बोली र व्यवहारले अर्थ राख्दछ, हाम्रा छोरीहरुका लागि मात्र होइन, सारा देशका बच्चाहरुका लागि।
बच्चाहरु, जसले मैले तपाइँलाई टिभीमा देखेँ भन्छन, जसले मैले तपाइँको बारे स्कुलमा रिपोर्ट लेखेँ भन्छन् । एक अश्वेत केटा जसले मेरो श्रीमानको अनुहारमा आशापूर्ण नजरले हेर्दै चकित हुन्छ र भन्छ, मेरो कपाल तपाइँकै जस्तो छ। त्यसैले आशाहरुलाई सधैं जीवन्त राख्न जरुरी छ । न डेमोक्रेट, न रिपब्लिकन, न लेफ्ट, न राइट, सबैले।
यो चुनाव पनि प्रत्येक चुनावझैँ कसले अर्को चार वा आठ वर्षसम्मका लागि बालबालिकाहरुलाई सही आकार प्रदान गर्ने शक्ति प्राप्त गर्दछ भन्ने विषयमा हो । र, यो चुनावमा हिलारी क्लिन्टन मात्रै त्यस्ती व्यक्ति हुन, जसलाई म त्यो जिम्मेवारीका लागि विश्वास गर्छु । मलाई साँच्चै विश्वास छ, हाम्री साथी हिलारी क्लिन्टन मात्रै राष्ट्रपति पदका लागि योग्य उम्मेदवार हुन्।
हिलारीले आफ्नो सारा जिन्दगी हाम्रो देशका बच्चाहरुका लागि समर्पित गरेकी छिन् । त्यसैले उनले देशलाई नेतृत्व गर्न सक्छिन् भन्ने विश्वास गर्छु । उनको आफ्नो छोरी मात्रै होइन, अन्य बच्चाहरुका लागि पनि उनी विश्वासकी पर्याय हुन् । ती बच्चाहरुका लागि जो गिरोहहरुबाट छलिन लामो बाटो हुदैँ स्कुल जान्छ। ती बच्चाहरु जो कलेजको खर्च कसरी धानुँला भनेर छक्क पर्छन, ती बच्चाहरु, जसका मातापिता अंग्रेजीको एक शब्द पनि बोल्न सक्दैनन् तर राम्रो जीवनको सपना देख्छन्। ती बच्चाहरु जो आफू के बन्न सक्छु भनेर निश्चित हुन हाम्रो अनुहारमा हेर्दछन् । तपाइँले देख्नुभएको छ, हिलारीले अथक रुपमा त्यस्ता बच्चाहरुको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन गर्न दशकौँ बिताएकी छिन्। वकिलको रुपमा अपांग बच्चाहरुका पक्षमा लड्दै होस् या प्रथम महिलाको रुपमा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवाका लागि खट्दै। र, सिनेटमा गुणस्तरीय चाइल्ड केयरका लागि पनि उनको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रह्यो।
म त्यस्तो राष्ट्रपति चाहन्छु, जसले यस देशका सबै मान्छेको अर्थ छ भन्ने चुरो कुरा केटाकेटीलाई सिकाओस् । त्यस्तो राष्ट्रपति जसले हामी सबै बराबर रुपमा सिर्जित हौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाओस्। हामी एक अर्कालाई सुन्छौँ र एकअर्काप्रति झुक्छौँ भन्ने बुझाओस् । किनभने हामी जहिले पनि साथमा हुदाँ बढी बलियो हुन्छौँ । यसै कारणले पनि म उभिएको छु हिलारी क्लिन्टनसँग । मलाई विश्वास छ उनी त्यस्तै राष्ट्रपति हुनेछिन्।”